ढुवानी - CAPSULE SIZES empty hard gelatin capsules
हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंलाई उत्तम स्थानान्तरण विकल्पहरू प्रदान गर्नु हो, तपाईं जहाँ बसे पनि फरक पर्दैन। हामी प्रत्येक दिन संसारभरका सयौं ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्दछौं, र हामी तपाईंलाई उच्च स्तरको सेवाहरू प्रदान गर्न कोशिस गर्दछौं।
अर्डर डेलिभरीको समय फ्रेम दुई भागमा प्रशोधन समय र शिपिंग समयमा विभाजन गरिएको छ।
सामान्यतया, प्रसंस्करण समय १-२ कार्य दिनहरू हुन्छन्, अनुकूलित उत्पादन वा उत्पादन प्रसंस्करण समय आउटस्टक हुन्छ, अर्को सूचनाको अधीनमा हुन्छ।
अमेरिका, मानक शिपिंग, 7-7 कार्य दिनहरू।
अमेरिका, एक्सप्रेस शिपिंग, २- working कार्य दिनहरू।
यूरोप, मानक शिपिंग, -5- working कार्य दिन।
यूरोप, एक्सप्रेस शिपिंग, २- working कार्य दिनहरू।
अन्य क्षेत्रहरु को लागी, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
डिलिभरी शुल्कहरू / शिपिंग शुल्क विस्तृत हुनेछ जब तपाईं चेकआउट पृष्ठमा प्रक्रिया गर्नुहुन्छ।
कुनै देश शिपिंग को लागी उपलब्ध छ?
हो हामी विश्वव्यापी व्यापार गर्दैछौं, यो विश्वव्यापी रूपमा शिप गर्न उपलब्ध छ।
तपाईंले प्रयोग गर्ने क्यारियरहरू र शिपिंग समय।
हामी हावाहरू, समुद्री, र एक्सप्रेस डेलिभरीद्वारा वस्तुहरू पठाउँदछौं (रोयल मेल / TNT / पार्सल फोर्स / UPS / DHL) जुन डेलिभरी ठेगाना र उत्पादन आदेशको आधारमा परिवर्तन हुन्छ। २ किलोग्राम मुनि क्याप्सूलको पूर्वनिर्धारित ढुवानी यूरोपको साथ रोयल मेल हुनेछ प्रायः तीन-पाँच कामका दिनहरू लिन्छन् विश्वको पाँचदेखि सात कार्य दिन भित्र।
कृपया नोट गर्नुहोस्: हामीले प्रदान गर्ने ढुवानी जानकारी एक दिशानिर्देश मात्र हो, र हामीलाई क्रमश: विभिन्न कुरियरहरू द्वारा प्रदान गरिएको छ। हामी कुन कुरिअरको साथ हामी कस्तो प्रकारको उत्पादनको साथ प्रयोग गर्छौं भनेर बताउँछौं; यद्यपि, हामी तपाईंलाई सूचित नगरी कुनै पनि कुरियर प्रयोग गर्ने अधिकार आरक्षित गर्दछौं।
यदि तपाइँ सिपिंग समयमा थप जानकारी चाहानुहुन्छ भने हामी अनुरोध गर्दछौं कि तपाइँले तलका सम्पर्क जानकारीको प्रयोग गरेर कूरियरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:
शाही मेल: www.royalmail.com
पार्सल फोर्स: www.fedex.com
Capsuleizes शिपिंग कटऑफ समय १ अपराह्न (GMT) हो, जब हामी प्रत्येक अर्डरलाई उही दिन शिप गर्ने प्रयास गर्छौं, यसले तपाईंको अर्डर पूरा गर्न २ 24–48 घण्टा लिन सक्दछ, सप्ताहन्त वा छुट्टिहरू समावेश नगरी। यदि हामीले 1 दिउँसो (GMT) पछि तपाईंको अर्डर प्राप्त गर्‍यौं भने, यो अर्को व्यवसाय दिन सम्म पठाउँदैन। र यदि तपाईंसँग आफ्नो अर्डरमा कुनै परिवर्तनहरू छन् भने यसले शिपिंग प्रक्रियामा पनि ढिलाइ गर्दछ।
तपाईंको अर्डर राख्दा कृपया तपाईंको वस्तुमा स्टक उपलब्धता सूचना जाँच गर्नुहोस्। यो वस्तु हो: स्टकमा | सामान्यतया २ 24 घण्टा भित्र पठाइन्छ।
मलाई थाहा छ यो पठाइएको छ?
तपाइँको वस्तु पठाइएको छ भनेर यकिन गर्न तपाइँ एक ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाइँ तपाइँको अर्डरको स्थिति र व्यक्तिगत आईटमहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो खाता विवरणहरू पहुँच गरेर र प्रम्प्टहरूको अनुसरण गरेर।
हामीलाई कुनै ढिलो डेलिभरीको बारेमा सूचित गर्नु अघि कृपया तपाईंको अर्डरको प्रेषणबाट working कार्य दिनहरू अनुमति दिनुहोस्।
तपाईको छिमेकीहरूसँग सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले पार्स छोडेको छ कि छैन हेर्नुहोस्, तपाईंलाई त्यहाँ भएको कुनै ओउटहाउसहरू जाँच गर्नुहोस् यदि यो तपाईंको लेटरबक्स मार्फत फिट हुँदैन र तपाईंको स्थानीय छनौट कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् कि वस्तु छ वा छैन जाँच्नको लागि। डिपोमा Undelivered को रूपमा फिर्ता गरिएको छ र संकलन को प्रतीक्षा गर्दै।
हाम्रो सबै उत्पादनहरू ट्र्याकि number नम्बरको साथ पठाइन्छ। यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यी सबै ट्र्याकि numbers नम्बरहरूले तपाईंलाई प्रत्येक चरणमा पार्सल ट्र्याक गर्न सक्षम गर्दैन। केही मात्र तपाईंलाई बेला बेलामा तपाईंको अर्डरको प्रगति हेर्न अनुमति दिँदछ।
मैले कर र कर्तव्य तिर्नु पर्छ?
डेलिभरीको लागि राखिएको अर्डरहरू भन्सार शुल्क वा आयात शुल्कको विषय हुन सक्दछ जुन आयात गरेको देशले डिलिभरी तपाईंको देशमा आइपुगेको बेला आयात गरिन्छ।
यी शुल्कहरू पार्सलका प्राप्तकर्ताले तिर्नु पर्छ। दुर्भाग्यवस, हामीसँग यी शुल्कहरूको नियन्त्रण छैन, र लागत के हुन सक्छ भनेर सल्लाह दिन सक्दैन (भन्सार नीतिहरू र आयात शुल्कहरू देश-देशमा व्यापक रूपमा भिन्न हुन्छन्)। यी अतिरिक्त लागतहरू पहिले के हुनेछ भनेर निर्धारण गर्न तपाईं आफ्नो देशको भन्सार कार्यालयसँग जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। खरीद गर्दै।